Iindaba -Ukwenza ngokwezifiso i-logo yakho yabucala, inkqubo yokwenza ngokwezifiso yobungcali igcina ixesha lakho kunye nomzamo.
Uyenza njani ilogo yakho yabucala, inkqubo yokwenza ngokwezifiso yobungcali igcina ixesha lakho kunye nomzamo.
1, Thumela ifayile yelogo
Ukulungiselela i-logo ngokwezifiso, nceda uthumele iifayile zomthombo we-logo kwifomathi ye-AI okanye yePDF. Ifayile yelogo ecacileyo inokusinceda ukuba sibonise ngcono ukuprinta kwelogo xa kuprintwa. Ifomathi yomfanekiso iya kufiphala emva kokwandiswa, ke asikucebisi ukuba uthumele ifayile yelogo kwifomathi yomfanekiso. Ukuba akukho fayile yomthombo, umyili wethu unokunceda abathengi ukuba benze ifomathi yelogo ifomathi kwi-AI okanye kwiifayile zomthombo wePDF ngesoftware yeAdobe Illustrator, kodwa oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo.
2, Yazisa ngendawo kunye nendlela yokuprinta ilogo
Iqela lethu lokuthengisa liya kunxibelelana ngokukhawuleza nabathengi apho uphawu kufuneka lubekwe khona, chazela umthengi kwiinkcukacha kwaye kufuneka uqinisekise kunye nomthengi ngombala, ubungakanani kunye nendlela yokuprinta yelogo. Kwiimveliso zesitokhwe esele zilungile, okwangoku sixhasa ushicilelo lwe-3D UV, kunye neemveliso ezingasetyenziswanga, sixhasa ushicilelo lwesilika, ukuprinta i-3D UV, ukunyathela okushushu, njl.
3, Qinisekisa unikezelo
Umzobo wesiphumo uyakwenziwa ukuqinisekisa kunye nomthengi malunga nemfuno ethile, ukuba kukho naluphi na utshintsho, umthengi unokuhlengahlengisa ilogo ngokweziphumo eziboniswe kwakhona.
4, Ukuqinisekiswa kweesampuli ezibonakalayo ngaphambi kokuveliswa
Ngaphambi kokuveliswa kwemveliso emininzi, siya kulungiselela ukwenza isampulu ebonakalayo ngokweemfuno zomthengi ngaphakathi kweentsuku zokusebenza eziyi-3-4, kwaye sithathe imifanekiso yesampulu ebonakalayo kumthengi ukuqinisekisa isiphumo kwakhona.
5, Qalisa imveliso ngobuninzi ekugqibeleni
Emva kokuba yonke into iqinisekisiwe, siya kulungiselela ukuqala imveliso ngobuninzi ngokweziphumo zeesampulu eziqinisekisiweyo. Umjikelo othile wemveliso yobunzima umiselwa ngokobungakanani besambuku. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, umjikelo wokuveliswa kwemithwalo yesitokhwe esele ilungile iphakathi kweentsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10 zomsebenzi, kwaye umjikelo wokuveliswa kwemivumbo elungiselelwe wena uphakathi kweentsuku ezili-15-25 zokusebenza. Ukuba i-odolo yomthengi ingxamisekile, ngokuxhomekeke kwimeko, amalungiselelo okuqala anokuqwalaselwa.
Ixesha leposi: Dec-09-2020
Izandiso zeEyelash, I-liner yamehlo, Abathengisi bee-Eyelash, eyeliner, Imivimbo yamehlo, Imivimbo ye-mink,